Monday July 13, 2015 - 14:19:55 in Wararka by Web Admin
Haddii dable Janaraal noqday. Haddii ma shaqeeyste taajir noqday.Haddii Dr. iyo Eng. Naaneeys noqdeen, Haddii Gudoomiye Gobal madaxweeyne noqday. Haddii saqiir Agaasime noqday. Haddii nin waalan mas'uul noqday. Haddii kii isaga ahaa wasiir noqda
Haddii dable Janaraal noqday. Haddii ma shaqeeyste taajir noqday.Haddii Dr. iyo Eng. Naaneeys noqdeen, Haddii Gudoomiye Gobal madaxweeyne noqday. Haddii saqiir Agaasime noqday. Haddii nin waalan mas'uul noqday. Haddii kii isaga ahaa wasiir noqday. Haddii xertii Mufti noqotay. Haddii xubin maamul degmo xildhibaan noqday. Haddii xil la qabto xabashi iyo hanta ku xirmay. Haddii tuugii talye noqday. Haddii dambiilihii diblomaasi noqday waa col ku dhaccadaa wana kuu talisay . ma quusan Irid ALLA oodo ma saara.( waa ku wareeray, soon ayaan xirtay waana iska seexdaday).
WAAN RIYOODAY waxaan kuriyooday :